खेललाई अझै रोमाञ्चक बनाउन टेस्ट क्रिकेटमा ३ नयाँ नियम लागू गर्न प्रस्ताव, Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
खेललाई अझै रोमाञ्चक बनाउन टेस्ट क्रिकेटमा ३ नयाँ नियम लागू गर्न प्रस्ताव
लण्डन। टेस्ट क्रिकेटलाई अझै रोमाञ्चक बनाउने प्रयास सुरु भएको छ । क्रिकेटको नियम बनाउने २३२ वर्ष पुरानो संस्था मेरिलेबोन क्रिकेट क्लवको विश्व क्रिकेट कमिटीले मंगलबार तीन अहम नियम परिवर्तनको प्रस्ताव गरेको छ । बैठकमा नो बलमा फ्रि हिट दिने, ढिलो खेललाई छिटो गर्नको लागि एक ओभरपछि अर्को ओभर सुरु गर्न ४५ सेकेण्ड मात्र समय दिने र आगामी जुलाइदेखि सुरु हुने वर्ल्ड टेस्ट क्रिकेट च्याम्पियनशिपमा उकै किसिमको बल प्रयोग गर्ने प्रस्ताव गरिएको हो । माइक गेटिङको अध्यक्षता रहेको एमसीसीको कमिटीमा पूर्व क्रिकेटर सौरभ गांगुली, कुमार सांगाकारा, रिकी पोन्टिङजस्ता दिग्गज क्रिकेटर सहभागी छन् ।
वन डे र टि–२० मा यसअघि नै नो बलमा फ्रि हिट दिइन्छ तर टेस्टमा भने यस्तो नियम छैन । नयाँ प्रस्तावित नियम पारित भएका अब टेस्टमा पनि नो बलपछिको बलमा फ्रि हिट पाइनेछ । ओभर ढिलो सुरु गर्ने समस्या हटाउन एक ओभर सकिएपछि बलिङ गर्ने टिमले ४५ सेकेण्डभित्रै दोसे ओभर सुरु गर्नुपर्नेछ । यसो नगरेमा पहिलोपटक टिमलाई चेतावनी दिइनेछ । दोस्रो पटक पनि ओभर सुरु गर्न ढिलो गरेमा पेनाल्टीवापत विपक्षी टिमलाई ५ अतिरिक्त रन दिइनेछ । यसबाहेक अब सबै टेस्टमा एउटै किसिमको बल प्रयोग गरिनेछ । अहिले विभिन्न देशमा टेस्ट क्रिकेट हुँदा फरक फरक बल प्रयोग हुन्छ । केही देशले एसजी, केहीले कुकाबुरा र केहीले ड्युक बल प्रयोग गर्छन् ।